Baidoa Media Center » Madaxweynaha Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiiro ka socda dalka Ingiriiska.
Madaxweynaha Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiiro ka socda dalka Ingiriiska.
October 3, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiska ku qaabilay Wasiirro ka tirsan Dowladda Britain oo magaalada Muqdisho socdaal ku yimid.
Wasiirrada uu maanta Madaxweynaha Jamhuuriyadda ku qaabilay xafiiska magaalada Muqdisho ayaa kala ah wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Britain iyo Wasiirka Dowladda Britain u qaabilsan arrimaha hormarinta waxaana ay ka wada hadleen arimmo dhowr ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii uu kulankaasi soo gebageboobay kadib la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay in labada Wasiir ay ka wada hadleen arimmo ay ugu horeeyso xiriirka labada dal iyo sidii ay ay Dowladda Ingiriiska u taageeri laheyd Dowladda cusub ee ay Soomaaliya yeelatay.